Iingxelo eziJonga Phambili - Sorrento Therapeutics
UkuPhumela kweeNkcazo zokuBheka
Ulwazi olunikezelwe kule webhusayithi lubandakanya ulwazi olukhangele phambili kunye neengxelo ezijonge phambili (ngokuhlangeneyo, "iingxelo ezijonge phambili" ngaphakathi kwentsingiselo yemithetho yezokhuseleko esebenzayo, kubandakanywa ngaphakathi kwentsingiselo "yechweba elikhuselekileyo" izibonelelo ze-US Private Securities Litigation. UMthetho woHlaziyo ka-1995) ezinxulumene ne Sorrento Therapeutics, Inc. ("I-Sorrento"). Iingxelo ezijonge phambili zibonisa izinto ezilindelwe ngabaphathi kunye neenkolelo zeSorrento malunga neziganeko ezizayo kwaye zinokubonisa izicwangciso zolawulo lweSorrento, iinjongo, iinjongo kunye nemisebenzi. Ezi ngxelo zekamva azihambelani ngokungqongqo nezibakala zembali okanye zangoku yaye zisenokukhatshwa ngamagama anjengathi “injongo,” “qikelela,” “kholelwa,” “unokuba,” “uqikelela,” “ukulindela,” “uqikelelo,” “uqikelelo,” “uqikelelo,” “uqikelelo,” “uqikelelo,” “uqikelelo” ” “nenjongo,” “ingaba,” “ceba,” “inokwenzeka,” “inokwenzeka,” “intando” namanye amagama namagama anentsingiselo efanayo. Ezi nkcazo zihambelana, phakathi kwezinye izinto, ulawulo lwe-Sorrento olulindelweyo malunga nezicwangciso, iinjongo, izicwangciso, ukusebenza kwexesha elizayo okanye ukusebenza kwemali, izicwangciso zoshishino kunye nezinto ezilindelekileyo, kunye nokulindela malunga nolingo lwezonyango, amaxesha ophuhliso, iingxoxo kunye namagunya alawulayo, iinkqubo zophuhliso, abaviwa bophuhliso kunye nophuhliso kunye nokuziphatha. amayeza ophando aphantsi kophuhliso yi-Sorrento kunye namaqabane anobuchule be-Sorrento. Iingxelo ezijonge phambili kule webhusayithi azizozithembiso okanye iziqinisekiso, kwaye akufuneki ubeke ukuxhomekeka ngokungafanelekanga kwezi ngxelo zijonge phambili kuba zibandakanya imingcipheko eyaziwayo nengaziwayo, ukungaqiniseki kunye nezinye izinto, uninzi lwazo olungaphaya kolawulo lukaSorrento kwaye olunokuthi lube ngaphaya kolawulo lukaSorrento. bangela ukuba iziphumo zokwenyani zahluke ngokwezinto ezibonakalayo kwezo zichazwe okanye zichazwe kwezi nkcazo zijonge phambili. Loo mingcipheko kunye nokungaqiniseki kuquka, kodwa akuphelelanga apho, impembelelo yeemeko zoqoqosho ngokubanzi, iimeko zoqoqosho kwishishini le-biopharmaceutical, utshintsho kwimo elawulayo, ukuguquguquka kwemarike yemasheya, ukuhla kweendleko, ukukwazi kwethu ukuphuhlisa nokukhusela ipropathi yethu yengqondo kunye nokuqonda. sisebenze ishishini lethu ngaphandle kokwaphula amalungelo epropathi yomenzi kwabanye, ukuthembela kumaqela esithathu kunye/okanye izivumelwano zentsebenziswano zophuhliso oluyimpumelelo kunye norhwebo lweemveliso zethu, utshintsho kumhlaba wokhuphiswano, utshintsho kumgangatho wokhathalelo lweempawu ezahlukeneyo apho iSorrento ibandakanyeka, kunye neminye imingcipheko echazwe kwingxelo yonyaka ye-Sorrento kwiFomu ye-10-K, kunye nezinye iifayili ezilandelayo ezenziwe ngamaxesha kunye ne-US Securities and Exchange Commission, ezifumaneka www.sec.gov. Le mingcipheko kunye nokungaqiniseki kunokubangela iziphumo zexesha elizayo, ukusebenza okanye impumelelo yahluke ngokubonakalayo kwiziphumo, ukusebenza okanye impumelelo echazwe okanye echazwe kwiingxelo ezijonge phambili. Iziphumo ezinjalo, ukusebenza okanye impumelelo ibandakanya, kodwa ayiphelelanga apho, ixesha lokubhalisa okanye lokugqitywa kwezilingo zeklinikhi, iziphumo zovavanyo lweklinikhi, ixesha kunye nemiphumo yesenzo solawulo, impumelelo ehambelanayo okanye ukungabikho kwempumelelo ekuphuhliseni nasekuzuzeni. Ukuvunywa okusemthethweni kwabaviwa bemveliso ye-Sorrento, impumelelo, ukusebenza kakuhle okanye ukhuseleko lwawo nawaphi na abaviwa bemveliso ye-Sorrento, ukukwazi ukunyusa, ukuqulunqa kunye nokuvelisa iindlela ezifanelekileyo zokuvelisa, ubuninzi beklinikhi okanye urhwebo lwabaviwa bemveliso ye-Sorrento, kunye nempumelelo ehambelanayo okanye ukungabikho. yokuphumelela kwimarike ukwamkelwa nayiphi na abaviwa imveliso Sorrento kaThixo. Uphuhliso lweziyobisi kunye nokuthengiswa kweziyobisi kubandakanya umngcipheko ophezulu, kwaye kuphela inani elincinci lophando kunye neenkqubo zophuhliso ezibangela ukuthengiswa kwemveliso. Iziphumo kulingo lwezonyango lwenqanaba lokuqala zisenokungabonakalisi iziphumo ezipheleleyo okanye iziphumo ezivela kwinqanaba lamva okanye kulingo olukhulu lwezonyango kwaye aziqinisekisi imvume yolawulo.
Kule webhusayithi, ulawulo lwe-Sorrento lunokuthi lubhekiselele kwiziphumo, uqikelelo okanye imilinganiselo yokusebenza engalungiswanga ngokungqinelana ne-US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) njengoko kuxeliwe kwiifayile ze-SEC zenkampani. Ezi ziphumo, uqikelelo okanye imilinganiselo yokusebenza ayiyomilinganiselo ye-GAAP kwaye ayenzelwanga ukuba ithathe indawo okanye ithathe indawo yeziphumo ezilinganiswe phantsi kwe-GAAP kwaye zincedisa kwiziphumo ezixeliweyo ze-GAAP.
Ezi nkcazo ezijonge phambili zithetha kuphela njengoko zenziwe kuqala okanye zihlaziywa kule webhusayithi, kwaye i-Sorrento apha ayifuni nayiphi na injongo, umsebenzi, isibophelelo okanye ukuzimisela ukuhlaziya okanye ukuhlaziya iingxelo ezijonge phambili eziqulethwe kule webhusayithi.